Gresy: “Niteraka ny Demokrasia Isika, Dia Navonointsika!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2011 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Ελληνικά, Français, русский, srpski, Italiano, македонски, 한국어, 繁體中文, 简体中文, polski, English
Ity ambany ity dia iray amin'ireo tantara maro henonao tato ho ato teny amin'ny araben'i Athens; miavaka izy ity noho ny nivoahany tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Misangy Fahafatesana, nosoratan'i Giorgos Aygeropoulos, Grika mpanao gazety malaza efa nahazo loka maro, fantatra amin'ny fandrakofany ny fifandonana , ady ary fanoherana:
Taorian'iray volana mahery nanaovana hetsi-panoherana sy fitangoronana milamina tao amin'ny Kianjan'i Syntagma (ny Lalàmpanorenana), nikasa ny hanodidina ny Tranon'ny Parlemanta ireo mpanao fihetsiketsehana ny Alarobia 29 Jona lasa teo, andro izay nanatanterahana ny fifidianana ny tetikasa “the Mid-Term Austerity”. Kanefa dia nanapa-kevitra ny tsy hamela izany hitranga ireo manampahefana Grika.
Araka ny Toko faha-11 ao amin'ny lalàmpanorenana Grika, ” ny fitangoronana eny ankalamanjana dia mety ho voararan'ny fanapahan-kevitra misy antony avy any amin'ny manampahefana, amin'ny ankapobeny raha ohatra ka goavana ny loza mitatao ho an'ny filaminam-bahoaka, ary amina faritra iray mazava, raha atahorana ny fanakotabàna ny fiainam-piaraha-monina sy ny ara-toekarena, araka ny voalazan'ny lalàna.”
Ny Amnesty International dia namoaka filazàna an-gazety momba ny fampiasana ireo entona simika tany amin'ny araben'i Athens ny 29 Jona. Ny Fikambanana Ara-Pitsaboana Grika ho Fiarovana ny Tontolo Iainana ary Manohitra ny Fandrahonana Niokleary sy Simika dia nanamarika tao anatin'ny lahatsoratra an-gazetiny [el] fa ny entona mandatsa-dranomaso nampiasain'ny mpitandro filaminana nandrava ny fikomiana dia fitaovam-piadiana simika ary voarara ny fampiasana azy ho enti-manohitra ny fahavalo amin'ny ady.
maika be, antso vonjy ho an'ireo mpitsabo mba ho tonga izao dia izao any #syntagma miangavy anao hi-RT misy ireo olona maratra ary tsy arak'ireo ekipa mpamonjy #29jgr
eo ambanin'ny fipoahan'entona/tselatra efa mandritra ny ora 12 manindritra izao ny kianjan'i #syntagma #greekdemo #greekrevolution Miangavy anao hi-RT mba hahalalan'izao tontolo izao ny zava-mitranga.
Manana anarana ny zava-nitranga tao afovoan'i Athens: fanambarana ho an'ny maro ny lalàna miaramila amin'ny fandraràna ny zo hifamory sy ny fahalalahana. #Syntagma.
Ny Fanjakana iray izay voafidim-bahoaka & manipy entona mandatsa-dranomaso aman-taonina @ ireo vahoaka ireo, dia tsy fanjakana demokratika tsotra izao. Fitondrana izany!#j29gr #syntagma.